I Mfesane ibonisa indlela - HeraldLIVE
The Algoa Sun I Mfesane ibonisa indlela January 25, 2014
NANGONA esisikolo singathathi ntweni, singenalo nebala elisemgangathweni, sizamile saphumelela kukhuphiswano lwemidlalo yeqakamba ebiphakathi kwezikolo ezingamashumi anesibini.
Isikolo samabanga aphezulu iMfesane ese-NU12 siye sanegqiyazana eliye lagqwesa kwimidlalo yeqakamba, ze lachongelwa ukudlalela i-Eastern Province.
Omnye wabadlali abaye bachongwa, u-Hanabe Khanyisa, uthe ukuzilolongela lemidlalo kubathathe iveki ezimbini. Wongeze ngelithi beqala ukwazi imithetho yeqakamba, nokuba lidlalwa njani.
“Khange kubelula kodwa sizamile ukufunda ngeqakamba kweziveki besizinikiwe, sade ke salonwabela ukulidlala.
“Nangona besele lisondelel’ ixesha lalemidlalo, besisoyika ukuba asisayi kuphumelela singazi ukuba kungade kubekho omnye wethu ongachongwa adlalele i-EP,” utshilo u-Hanabe.
Eliqela lamantombazana aphantsi kweminyaka elishumi elinesithandathu, liqeqeshwe ngu titshalakazi u-Lulama Yako phantsi kweemeko ezimaxongo zokungabi nabala elisemgangathweni, nokungabinazo izixhobo ezipheleleyo, kodwa latyhala ngesifuba.
“Seva ukuba kukho ukhuphiswano lweqakamba labasetyhini olubizwa Girls Six Aside Festival, saqala sangenela kulonyaka, siyiqala ke phofu nalento siyenzayo,”utshilo ongumququzeleli wemidlalo kwesisikolo, u-Nocwaka Kanana.
Uthe injongo zalemidlalo kukuphucula umdlalo weqakamba kumantombazana asakhulayo, nokubona izakhono zawo esakhula, kwaye iye ivule amathuba amahle kuzo zonke izikolo ezikwi-league nezo zingadleli-league ngoba ikwayiyo nendlela entle yokubhaqa izakhono kwabo banazo.
Kumdlalo wokuqala badibane ne-Chatty, kambe i-Chatty yawuphumelela umdlalo. “Sadana sakunga wuphumeleli umdlalo wokuqala, kodwa sinalo ithemba, kwaye sabe sibona ukuba abantwana isipho sokudlala sona banaso nangona beqala ukudlala.
“Kowesibini siye sazama sizimisele phantsi kweemeko ezinzima sidlala ne-DF Malherbe sawuphumelela lowo umdlalo,” utshilo u-Kanana.
Abafundi ababini abaye bagqwesa kulemidlalo ibe ngu-Olwethu Mosala kunye no-Khanyisa noye wachongwa ukuba adlalele i-Eastern Province.
“Bendiqala ngqa ukudlala umdlalo weqakamba, kodwa ndiyavuya ndithe ndathatha inxaxheba kulemidlalo” utshilo u-Khanyisa.
“Ukususela ngoku sibheka phambili, sifuna ukubalolongela imidlalo ezayo,” utshilo u-Kanana.
Popular teacher always had smile
Dish to keep family happy